Yandex.Taxi iyo Uber waxay ku biireen ciidamada 6 dalka | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya374 ArmeniaYandex.Taxi iyo Uber, 6 waxay ku biireen ciidamada dalka
15 / 07 / 2017 374 Armenia, 7 Kazakhstan, 7 Russia, 994 Azerbaijan, 995 Georgia, Aasiya, YURUB, DUNIDA, tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels
Yandex.Taxi iyo Uber, 6 waxay ku biireen ciidamada dalka: Yandex.Taxi iyo Uber, 6 waxay go'aansadeen in ay midoobaan hawlahooda dalka. Qaabka cusub ee wadashaqeynta baabuurta, kaas oo ka soo bixi doona mideynta labo magacood, ayaa u adeegi doona Ruushka, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia iyo Kazakhstan.
Barnaamijka taksiga ee online-ka Ruushka Yandex.Taxi iyo shirkadda kirada baabuurta kirada ee Uber ayaa saxiixday heshiis weyn. Isku darka laba difaac oo kala duwan oo ka mid ah tusaalooyinka ugu fiican ee isbeddelka dijital ah ee adduunka, waxay abuureen qaab cusub oo wadajir ah. Habka wadaaga cusub ee baabuurta, kaas oo bixin doona beddel muhiim ah oo loo adeegsado isticmaalka gaariga iyo gaadiidka dadweynaha, ayaa la filayaa inuu qeyb ka qaato 5-6 oo ka socda qaybta taksiyada ee Russia.
Codsiga cusub, oo saameyn weyn ku yeelan doona dhaqaalaha kumbuyuutarrada ee sii kordhaya, wuxuu u shaqeyn doonaa sida soo socota: Yandex.Taxi iyo Uber oo loogu talagalay isticmaalayaasha ayaa horay u shaqeyn doona. Darawalku waxay u gudbi doonaan barnaamij isku dhafan oo u oggolaanaya inay ka soo qaadaan dadka isticmaala labada Yandex.Taxi iyo Uber. Thanks to the platform gaari wadajir ah, tirada gaadiidka u adeega ayaa si weyn u kordhaya. Si kastaba ha ahaatee, waqtiga sugitaanka ee rakaabka waa la dhimi doonaa. Rakaabka waxay leeyihiin faa'iido u socodka qiime jaban, halka darawalku u adeegi karaan macaamiil badan saacad kasta. Si loo kordhiyo awoodda cusub, Yandex ayaa sidoo kale loo isticmaali doonaa tiknoolojiyadda wareega iyo khariidadaha adduunka.
Isticmaalayaasha waxay awoodi doonaan inay ka faa'iidaystaan ​​qaabka cusub ee caalamka. Isticmaalayaasha Yandex.Taxi waxay awoodi doonaan inay wacaan qalabka Uber ka codsiyada Yandex.Taxi, tusaale, marka ay u safrayaan London ama Bangkok. Dalxiisayaasha ka socda Paris ilaa Moscow ayaa sidoo kale awoodi doona inay wacaan gaari Yandex.Taxi iyada oo loo marayo barnaamijka Uber. Shirkadda labada shirkadood ayaa sidoo kale ku jiri doonta UberEATS, oo ah dalabka cuntada ee online-ka ah ee lixda waddan ee ay khuseyso.
Qiimaha wadashaqeyntu waxaa lagu dhawaaqay inuu yahay 3.73 bilyan oo doolar. Uber 225 ayaa maalgelin doonta malaayiin doolar oo Yandex waxay maal-galin doontaa 100 Milyan Dollar. Yandex wuxuu leeyahay% 59,3 iyo Uber% 36,6 ee shirkada cusub, halka inta soo hartay% 4,1 ay kormeerayaan shaqaalaha. Iyadoo la ansixiyey hannaanka maamulka shirkadda wadaaga ah ee hirgeli doona nooca cusub, 2017's 4. ayaa la rajeynayaa in uu shaqeyn doono rubuca.
Waxaa jira metro iyo cillado khaas ah oo dalkan jooga
Dhibaatada dheer ee fog ee UBER
Bay Bridge waxay ku biireysaa laba dhinac
Gaadiidka dadweynaha ee bilaashka ah ee Kocaeli 17
15 ee jidadka Ankara oo la xiray bishii July